Wi-Fi သူခိုးထောက်လှမ်း: ငါ့အ Wi-Fi Pro ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ? | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Wi-Fi သူခိုးထောက်လှမ်း: ငါ့အ Wi-Fi Pro ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ?
Wi-Fi သူခိုးထောက်လှမ်း: ငါ့အ Wi-Fi Pro ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ? APK ကို
သငျသညျနှေးနှေး Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ Wi-Fi ကိုခိုးယူလျှင်, ဤတွင်သည်အဘယ်မှာရှိ Wi-Fi သူခိုးထောက်လှမ်း: ငါ့အ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ? နေရာလေးကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံး & အရှိဆုံးတိကျ ငါ၏အကွန်ယက်ပေါ်တွင် whos ကြည့်ဖို့ Power tool ကို။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ wifi အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကပြောပြရန်မည်သို့မည်ပုံရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာသင့်ကွန်ယက်ပေါ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေပြသထားတယ် & သင်သည်သင်၏ wifi ကိုခိုးယူတာဖြစ်ပါတယ် & သင်သည်ငါ၏ wifi ကို download အပေါ်သူသည်သိရကြလိမ့်မည်သူတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြကုန်အံ့သောဤ wifi သူခိုး detector App ကိုအလွန်လွယ်ကူသည်။ လူအတော်များများဟာသင့်ရဲ့ wifi အပေါ်သော်လည်းယခုင်း၏ဖြေကြားခဲ့သူကိုကြည့်ဖို့ဘယ်လောက်နဲ့တူဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှိသည်။ သငျသညျအငျတာနကျများအတွက်ပေးဆောင် & သင်သည်အခြားသူများကိုဒီ wifi သူခိုး Finder သင်တို့အဘို့ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုကြပါစို့အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ယခုတွင်သင်သည်ငါ၏အ wifi ကိုအသုံးပြုတဲ့သူစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
သင့်ဖုန်းမှသင့် WIFI controller
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ wifi သို့မဟုတ်မူသောငါ့ wifi ပေါ်မှာသုံးပြီးသူကိုစစ်ဆေးပုံကိုမသိကြပါလျှင်သင်ရုံသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည် Wi-Fi သူခိုးထောက်လှမ်း: ငါ့အ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ? Pro ကို App ကိုဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူအားလုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရုံရိုးရှင်းသော button ကိုအတူက wifi စကင်နာ built-in ကိုအကောင်းဆုံးသုံးပြီး wifi စိစစ်သည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည် Wi-Fi အသုံးပြုသူများအများ၏စာရင်းအရ။ သင်စာရင်းရှိသည့်အခါသင်တို့ရှိသမျှသည်အသုံးပြုသူများအတွက် ip address ကို lookup ပြုလုပ်နေလုပျနိုငျနှင့်သင်ပိုမိုလိုပါကအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပေါငျးတို့သအသုံးပြုသူများအများအတွက် mac address ကို lookup ပြုလုပ်နေလုပ်ပါ။ wifi လုံခြုံရေးကြှနျုပျတို့အားလုံးအတှကျအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Wi-Fi Scanner ကို built-in ဤကဲ့သို့သော Tools များနှင့်အတူဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြ၏။
📶 MY WIFI အသုံးပြုနေသည် WHO က
ဒီ App ကိုအသုံးပြုပါ & သင့်ရဲ့ wifi router ကို၏ Wi-Fi စစ်ဆေးရေးဖြစ်လာသည်။ သင်သည်သင်၏ wifi router ကိုအပေါ်အချို့သောသူစိမ်းကိုတွေ့မြင်လျှင်သူတို့ကိုပိတ်ဆို့ဖို့ router ကို setting များကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ router ကို setting များကိုအဘို့တံခါးပေါက် ip address ကိုထောက်ပံ့နှင့်သင့် wifi ကွန်ယက်၏တစ်ဦး wifi စစ်ဆေးရေးဖြစ်လာကြပါပြီသင်မူသောငါ့ wifi ပေါ်မှာကြည့်ဖို့ wifi အသုံးပြုသူစစ်အဖြစ်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် .. ဒီ App ကိုအလွန်တိကျမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏သင့်ရဲ့ wifi network တစ်ခုနှင့်သင် wifi အသုံးပြုသူစစ်ဆေးရန်အခွင့်အရေးရှိသည်
သငျသညျ wifi သူခိုးတွေဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အခါမှာဒါဆိုသင် wifi အာနိသင်တိုးမြှင့် signal ကိုတိုးတက်ကြပါလိမ့်မယ်။
Wi-Fi သူခိုးထောက်လှမ်း: ငါ့အ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ? အင်္ဂါရပ်များ: 🔎
✅အကောင်းဆုံး wifi စကင်နာ
✅သင့်ရဲ့ wifi network ပေါ်မှာသူစိမ်းကို detect
✅ Check ငါ၏အ wifi အပေါ်သောသူသည်
✅ IP address ကို lookup ပြုလုပ်နေခြင်းနှင့် MAC address ကို lookup ပြုလုပ်နေ
✅ Wi-Fi လုံခြုံရေး
သငျသညျအလွန်နှေးကွေးသောအင်တာနက်နှင့်အတူရင်ဆိုင်နေရလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကထိုကိစ္စတွင်ငါ၏အ wifi network ကိုမြန်နှုန်းကိုခိုးယူလျှင်ထို့နောက်သင်တို့သည်ငါ၏ Wi-Fi ကို download အပေါ်သူသည်စဉ်းစားမိပေမည်။ အခမဲ့ wifi ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲအဖြစ်သင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးသူအဲဒီလူကို? ထို့နောက်သူတို့ကသင့်ရဲ့အင်တာနက်ကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။ netgear လမ်းကြောင်း, Huawei Router က, dlink Router က, belkin router များအပါအဝင် tp link ကို router ကို & အများအပြားပိုပြီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြား router များကိုလည်းထောက်ခံနေကြသည်အောက်ပါ router များများအတွက်ထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်။
fixed bug တွေ
Wi-Fi သူခိုးထောက်လှမ်း: ငါ့အ Wi-Fi Pro ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ?
4.47 ကို MB